faaruqin faaruq ah & bacda barafaysan ee Shiinaha Beyin xirxirashada
Bacda cuntada caag barafaysan oo tayo sare leh OEM
Waxaa jira 2 qaab oo aan u tixgelin doonno isticmaalka boorsada barafaysan, 0 ℃ iyo ka hooseysa 0 ℃. Halka waxyaabaha u baahan in lagu hayo 0 ℃, bacaha badankood caadi ahaan waa hagaagi doonaan, haddii alaabada loo baahan yahay in lagu ilaaliyo 0 ℃, markaa bacda heerka qaboobaha ah ayaa loo baahan doonaa. Bacda ugu fiican waxay noqon doontaa Nylon / Qaboojiyay PE.
Bacda kaydinta cuntada faakiyuumka kuleylka ah
Isticmaalka ugu fiican ee bacda faakiyuumka waa in cimri dherer laga helo badeecadaha ku jira gudaha. In kastoo caadi ahaan haddii aad kaliya rabto hawl aasaasi ah, markaa PET / vacuum PE ayaa ku filnaan doonta in la isticmaalo, haddii aad rabto waxyaabaha ugu fiican, markaa Nylon / PE ayaa noqon doonta dookhaaga. Dabcan, foornada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa bacda faakiyuumka.
Bacda soo-celinta caagga ah ee cuntada OEM
Inta badan jawaabta jawaabta waa nooc ka mid ah bacaha faakiyuumka, waxay noqon kartaa bac fidsan ama boorso istaag ah, Bacaha jawaabta badankood ma laha jiinyeer, laakiin ilmo jeexitaan ayaa loo baahan yahay.
Shiinaha bac boorsada udgoon zip jumlada
Boorsooyinka dhir udgoon badanaa waa boorsooyinka istaaga ama bacaha fidsan, Sidoo kale waxaad ku dari kartaa daaqad cad oo ka horeysa boorsooyinka macaamiisha si toos ah ayey ugu arki karaan dhir udgoonka ku jira bacda. sii dheeree nolosha dukaanka iyo udgoon ee dhir udgoon.